काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका २ आर्थिक वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवैखाले लगानी प्रस्तावमा उल्लेख्य कमी देखिएको छैन । स्वदेशी र वैदेशिक गरी कुल प्रस्तावित लगानीमा २ दशमलव ६३ प्रतिशतको झीनो वृद्धि देखिए पनि वैदेशिक लगानीमा भने १५ दशमलव २९ प्रतिशतको संकुचन देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रस्तावित वैदेशिक लगानीमा १५ दशमलव २९ प्रतिशतले कमी आएको छ । उक्त वर्ष यस्तो प्रस्तावित लगानी रू. ३२ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको थियो । यसको आव २०७६/७७ मा यस्तो लगानी रू. ३७ अर्ब ८० करोड थियो । प्रस्तावित वैदेशिक लगानीका साथसाथै उद्योग दर्ता संख्यामा पनि कमी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो वर्ष ३४४ उद्योग दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १८३ उद्योग दर्ता भएका हुन् ।
स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल रू. १ खर्ब ५६ अर्ब ६४ करोडका २०३ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यीमध्ये वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू १८३ ओटा छन् । यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुुल २७७ उद्योग दर्ता हुँदा रू. १ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड लगानीको प्रस्ताव उद्योग विभागमा आएको थियो । यसमा वैदेशिक लगानीका २२३ उद्योग थिए । प्रस्तावित लगानी रू. ३७ अर्ब ८० करोड थियो ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार कोरोनाका २ आर्थिक वर्षमा भन्दा त्यसको अघिल्ला २ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७४/७५ मा कुल लगानी अंश बढी देखिएको छ । २०७४/७५ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रस्ताव रू. ३ खर्ब ४९ अर्ब देखिएको छ भने वैदेशिक लगानी प्रस्ताव पनि उल्लेख्य देखिन्छ ।
यो वर्ष प्रस्तावित वैदेशिक लगानी रू. ५५ अर्ब ६१ करोड थियो । यसैगरी २०७५/७६ कुल ४३९ उद्योग दर्ता हुँदा प्रस्तावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रू. २ खर्ब ८३ करोड थियो । वैदेशिक लगानी यस आर्थिक वर्षमा भन्दा कोरोनाका २ आर्थिक वर्षमा बढी आएको छ । विभागका अनुसार उक्त वर्ष वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव रू. २५ अर्ब ४७ करोड थियो । यसको तुलनामा कोरोना कालका आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी प्रस्ताव बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले कोरोनाकै कारण अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष लगानी प्रस्तावमा केही अन्तर आएको बताए ।
तर, अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी प्रस्तावलाई सकारात्मक मानिएको उनको भनाइ छ ।